samsung galaxy s8 mutengo unodonha kusvika chete $ 430 pane ebay
Kuru Nhau & Ongororo Deal: Dual-SIM Samsung Galaxy S8 ikozvino inodhura chete $ 430 paBay
Deal: Dual-SIM Samsung Galaxy S8 ikozvino inodhura chete $ 430 paBay
Iine Galaxy Note 9 padhuze nepakona, vatengesi vazhinji muUnited States vari kutsvaga kubvisa nhare dzakura kuti vawane nzvimbo Samsung & apos; s itsva mureza. Iyo Galaxy S8, iyo kambani & apos; yegore rapfuura yepamusoro-tier foni iri kutengeswa nguva dzese, iyo yega nyaya iri kuwana yakanyanya dhiri.
Kana iwe usingafarire & kuwana apost yakura zvishoma, iyo Galaxy S8 ikozvino yave kuwanikwa kweinenge hafu yemutengo weMSRP. Mari yeiyo smartphone yaive yakatenderedza $ 700- $ 750 pakuvhurwa, asi iwe unogona kuwana imwe isingasviki $ 500 mazuva ano.
Sezvineiwo, iwe unotora imwe chete ye $ 430 kuburikidza neBay. Foni iyi nyowani uye inouya yakavhurwa mubhokisi risina kuvhurwa, saka maapos senge kutora imwe kubva kuchitoro. Nekudaro, sezvo uyu ari iwo wepasi rose modhi, hazvishande pane vatakuri veCDMA seSprint neVerizon.
Zvakare, iwe & apos; uchaona kuti eBay mutengesi chete ane iyo goridhe vhezheni yeiyo Samsung Galaxy S8 inowanikwa muchitoro, mhando ye bummer kune avo vanofarira echinyakare mavara.
renyeredzi s7 att zuva rekuburitsa
giraxy s7 vs lg g5 kamera
Prototype yechishanu chizvarwa Apple iPod touch inoratidza 30 pini chiteshi
5 yakanakisa Superman mitambo yeApple neIOS - ponesa pasi seMurume weSimbi!
Samsung Galaxy Watch Active 2 vs Galaxy Watch, Active, uye Gear S3: yakanaka yekuvandudza?
CEH v10 - Tumira Bvunzo Kudzidza Nyora kumusoro
USA! Pixel 2 mitengo kunze kwenyika inoita America kunyemwerera, zvakanyanya kunge maPhones '
Yechipiri-chizvarwa iPhone SE iri kunyatso kubhadhara kune Apple
Galaxy S6 ine bvisika rinodzoserwa uye bhatiri rinotsiviwa, sekureva kwebhuku, ingo usayedze kumba
Nei usinga & apos; t iPhones dzinogara-dzichiratidzwa sechinhu?
Yakanakisisa Buy Mutungamiriri & apos; s Zuva rekutengesa: heano akanakisa madhiri
Iwo akanakisa emabhangi emagetsi eiyo iPhone yako (2019 edition)